Qarsoodi: Hagaaji Saamaynta Xayeysiiskaaga Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Qarsoodi: Hagaaji Saamaynta Xayeysiiskaaga Warbaahinta Bulshada
Khamiis, Juun 12, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Waqti ka dib, suuqleydu waxay soo saareen habab gaar ah oo cusub oo lagu soo saaro hagitaanno. Laakiin xayeysiisyada khadka tooska ah wali waxay ku hayaan booska suuqa. Daraasadda Appssavvy, "Tusmada Waxqabadka Bulshada - Qiyaasta Waxtarka Xayeysiinta Bulshada" ee la qabtay bishii Abriil 2011, waxay muujineysaa in xayeysiinta lagu dhex daray nashaadaadka bulshada ee ku faafaya ciyaaraha bulshada, codsiyada, iyo degellada internetku ay 11 jeer ka waxtar badan yihiin raadinta la bixiyay, iyo laba jeer sida wax ku oolka ah sida warbaahinta hodanka ah.
Xayeysiinta internetka ee dhaqameed, warbaahinta bulshada ama meelaha kale, waa sanduuq ama xayeysiis banner. In kasta oo markii hore waxtar laheyd, xayeysiisyada noocan oo kale ah hadda waxay soo saaraan CPMs hooseeya waxayna hoos u dhaceen waxtarkooda sanadihii la soo dhaafay. Codbixinta 2010 Harris Interactive ayaa muujisay in boqolkiiba 43 dadka isticmaala internetka ay iska indha tiraan xayeysiinta boorarka. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in dadka isticmaala shabakadaha bulshada ay haystaan ​​waqti yar (iyo feejignaan dheeri ah!) Si ay ugu hibeeyaan xayeysiisyada, oo ay u arkeen inay yihiin mashquul.
Appssavvy wuxuu isku dayaa inuu hubiyo in xayeysiinta warbaahinta bulshada ay gaarsiiso ROI caafimaad leh qaab cusub oo loogu talagalay xayeysiinta internetka.
Ku-xirnaanshaha Appssavvy waa madal tiknoolajiyad xayeysiis ku saleysan firfircoonaan ah oo u oggolaanaysa suuqleyda inay furaan fursado cusub oo xayeysiin ah halkii ay si fudud uga iibsan lahaayeen booska kaydka jira.
Barxadda ku-xirnaanshaha waxay xaqiijineysaa in isticmaaleyaashu ay ku qanacsan yihiin xayeysiisyadooda. Waxay la socotaa dhaqanka isticmaalaha waxayna gudbisaa xayeysiiska markii adeegsaduhu ku nasto bartamaha hawsha. Waxay sidoo kale hubineysaa in xayeysiiska uu ku dhexjiro khibradda guud. Si kale haddii loo dhigo, waxay muujineysaa xayeysiisyo khuseeya, waxay hubineysaa in xayeysiisyada ay la xiriiraan waxqabadka uu jecel yahay isticmaalaha, oo ay isku dayaan in aysan carqaladeyn isticmaaleha.
Suuqgeyntu waxay aragti kaheleysaa wax ku oolnimada xayeysiinta iyada oo loo marayo qiyaasaha ololaha, Analytics iyo cilmi baarista ay bixiso Advocacy.
Wixii macluumaad dheeraad ah, qiimeyn, ama si aad u bilowdo daabacaadda xayeysiiska adoo adeegsanaya Advocacy, fadlan booqo: http://appssavvy.com/#contact.
Tags: AdvocacyAppSavvyOlolayaashajaangooyooyinkadhaqanka isticmaalaha
Maxay Suuqleyda Soo-Galaya U Isticmaalaan Macluumaadka
Jul 14, 2012 markay ahayd 3:03 AM
Yup. Waxyaabaha si isdaba joog ah ayey ugu beddelayaan SM waana wax aad u wanaagsan inaad maareeyso inaad la timaaddo talooyin waxtar leh si looga faa'iideysto isbeddelka loona xoojiyo waxtarka SMA.